Fanambarana Iraisam-pirenena momban'ny Zon'Olombelona - Wikipedia
Heverina fa ny fankatoavana ny fahamendrehan'olombelona sy ny zony mitovy ary tsy azo tohintohinina dia anisan'ny fototry ny fahafahana, ny rariny ary ny fandriam-pahalemanana eran-tany, Heverina fa ny tsy fahafantarana sy fanaovana tsinintsinona ny zon'olombelona dia mitarika amin'ny fihetsika feno habibiana mampikomy ny fieritreretan'ny mpiara-belona. Ny fametrahana tontolo vaovao ; hivelaran'ny olona afaka eo amin'ny filazana ny hevitra sy ny finoana, ary tsy voagejan'ny tahotra sy ny fahoriana no hetaheta lehibe indrindra ho an'ny olombelona, Heverina fa ilaina ny miaro ny zon'olombelona amin'ny fametrahana rafitra tan-dalna mba tsy hitarika azy hikomy sy hanohitra ny fampihorohoroana sy ny fampijaliana, Heverina fa zava-dehibe ny famporisihana hatrany ny fifandraisana ara-pirahalahiana eo amin'ny firenen-tsamihafa, Heverina fa ny Fanjakana Mpikambana rehetra dia manaiky hanaja ny zon'olombelona sy ny fahafahana fototra, ka miara miasa amin'ny Firenena Mikambana izy amin'izany, Heverina fa tao anatin'ny Dina dia nohamafisin'ny olon-drehetra ao amin'ny Firenena Mikambana indray ny finoany
an'ireo zo fototry ny olombelona- hanajana ny hasina maha-olombelona, ny fitovian-jo ny lehilahy sy ny vehivavy; ary izy rehetra dia maneho ny fahavononany hiasa ho an'ny fandrosoana socialy hanatsaratsara kokoa ny farim-piainana ao anatin'ny fahafahana bebe kokoa. Heverina fa ny Fanjakana mpikambanarehetra dia manaiky hanaja ny zon'olombelona sy ny fahafahana fototra, ka iara-miasa amin'ny Firenena Mikambana izy amin'izany. Heverina fa ny fitoviam-pijery mikasika ireny zo sy fahafahana ireny zo sy fahafahana ireny dia zava-dehibe ho an'ny fanatanterahana feno izao fiandanianan miharihary izao. Koa dia manambara ny Fivoriambe fa ity Fanambarana iraisam- pirenena momban'ny Zon'olombelona dia toy ny idealy iombonana ka ny firenen-drehetra sy ny vahoaka rehetra no hiara-manatratra azy mba hahatonga ny olona tsirairai sy ny sampan-draharaha samihafa ao amin'ny fiaraha-monina hiezaka hampandroso ny asa enti-manaja ny so sy ny fahafahan'olombelona amin'ny allan'ny fampianarana sy ny fanabeazana ary hiantoka koa ny hampanekena sy hampakatoavana izany amin'ny allan'ny fepetra samihafa na nasionaly na iraisam- pirenena ho fampiarana hentitra ny Zon'olombelona na eo amin'ny vahoakan'ny Fanjakana efa mpikambana na eo amin'ny mponina any amin'ireo tany napetraka eo ambany fitantanan'izy ireny.
Mitovy ny olon-drehetra eo anatrehan'ny lalàna ary samy manan-jo ho arovan'izany lalàna izany, indrindra manoloana izay mety ho fanavakavahana na fihantsiana manana endrika fanavakavahana ka mety hanitsakitsaka ity Fanambarana ity.
1. Izay olona voapanga dia heverina ho mbola tsy manan-tsiny mandra- pivoakan'izay didy manameloka azy. Izany didy izany dia havoakan'ny tribonaly nitsara am-pahibemaso ka nanome ny antoka rehetra fa afaka niaro tena ilay voampanga. 2. Tsy misy olona azo helohina noho ny asa na fanadinoana raha toa izany ka natao tamin'ny fotoana izay tsy mbola ahafantarana fa mahadiso ilay fihetsika na ilay asa araka ny lalàna nasionaly na iraisam-pirenena. Torak'izany koa, tsy misy azo saziana mihoatra noho izay sazy voalaza fa ampiharina ao amin'ny tany misy azy tamin'ny fotoana nanaovany ilay fahadisoana.
Tsy misy olona azo hitsabahana ny fiainany manokana, ny fianankaviany, ny fonenany, ny taratasy ifandefasany na hitsahana ny voninahiny sy ny lazany. Zon'ny olona ny harovan'ny lalàna eo anatrehan'ny fanitsakitsahana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna rehetra.
1. Manan-jo hizaka zom-pirenena ny isam-batan'olona. 2. Tsy misy olona azo verezin-jo tsy amin'ny rariny na rarna tsy hiova zom-pirenena.
1. Rehefa tonga taona ny lehilahy sy ny vehivavy dia manan-jo hivady sy hanorina fianankaviana ka tsy mahasakana izany na fihodirana na zom-pirenena na finoana. Mitovy zo eo anatrehan'ny fanambadiana, mandritra ny fanambadiana ary amin'ny faharavan'ny fanambadiana izy ireo. 2. Tsy misy mariazy azo raiketina raha tsy sitrapon'ireo hivady. 3. Ny fianankaviana no fototra ara-boajanahary iorenan'ny fiaraha- monina, ka manan-jo hoarovan'ny fiaraha-monina sy ny fanjakana.
3. Ny sitrapon'ny vahoaka no fototry ny fahefan'ny fitondram- panjakana Amin'ny fifidianana no tokony hanehoany izany sitrapony izany, ka tokony ho marina sy hisy ara-potoana izany fifidianana izany. Handraisan'ny
daholobe anjara ary miafina ny latsa-bato na ara-pomba mitovitovy amin'izany ka miantoka ny fahalalahan'ny fifidianana.
1. Manan-jo hanana fari-piainana antonony sy ampy ny tsirairay mba hiantoka ny fahasalamany, sy izay rehetra mahasoa azy sy ny
ankohonany : sakafo, fitafiana, fonenana, fitsaboana ary kojakoja sosialy ilaina rehetra. Manan-jo ihany koa hahazo fiahiana ara-tsosialy ny tsirairay raha sendra ny tsy fananan'asa, aretina, takaitra, fahanterana na antony hafa tsy niniany ka tsy ahafahany mivelona.
2. Ny lalàna ihany no mametra ny fizakan'ny tsirairay ny zony sy ny fahafahany. Izany dia mba hitandroana ny fanajana ny zon'ny hafa, ny lalàna ara-moraly, ny filaminam-bahoaka ary ny mahasoa ny olon- drehetra ao anatina fiaraha-monina demokratika.
((fr)) Courte vidéo sur l'histoire de l'adoption de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanambarana_Iraisam-pirenena_momban%27ny_Zon%27Olombelona&oldid=637430"
Voaova farany tamin'ny 21 Jiona 2013 amin'ny 12:12 ity pejy ity